Inona no hatao any Tenerife | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Inona no ho hita, Tenerife
Ahoana ny fahalalana Tenerife anio? Manomboka ny herinandro amin'ny Nosy Canary fito lehibe indrindra isika, a toerana fitsangatsanganana tsara Raha tianao ny natiora dia mandray mpitsidika mandritra ny taona izy.
Androany, araka izany, ny lahatsoratray inona no hatao any Tenerife.
2 Inona no ho hita ao Tenerife
Araka ny nolazainay Tenerife Io no nosy lehibe indrindra ary iray amin'ny be mponina indrindra ao amin'ny Canaries. Mponina marin-toerana efa ho iray tapitrisa no monina eto fa mpizahatany an-tapitrisany no ampiana isan-taona tahaka izao, tsy isalasalana, iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Espana, raha tsy ny malaza indrindra.
Hay seranam-piaramanidina roa, ny atsimo sy ny avaratra, ary ny renivohitra dia ny tanànan'i Santa Cruz de Tenerife. Ny nosy dia vokatry ny fampifangaroana, an-tapitrisany taona lasa izay, amin'ireo nosy telo izay nipoitra indray fotoana vitsy lasa izay avy any amin'ny halalin'ny Atlantika ary naka endrika volkano. A) Eny, samy hafa ny endrinyManomboka amin'ny tendrombohitra avo (eto an-tampon'ny tendrombohitra avo indrindra eto Espana, ny Tendrombohitra Teide), hatrany amin'ny torapasika manonofinofy, izay mamirapiratra volamena amin'ny masoandro.
Inona no ho hita ao Tenerife
Voalohany, ny renivohitra. Vavahady tsara foana ny tanàna. Santa Cruz Any amin'ny faritra atsinanana atsinanan'ny Tenerife izy io ary manana iray amin'ireo seranana tranainy indrindra amin'ny Oseana Atlantika. Avy eto dia sambo maro no niainga nankany Amerika ary nivoatra haingana dia haingana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tanàna lehibe izao ary tsy mamela ny mpitsangatsangana na mpifindra monina intsony ny seranana, fa ny sambo fitsangatsanganana mankany Karaiba.
Raha tianao ny onja an'ny fiara fitateram-bahoaka Tsy manan-kialofana ianao dia afaka maka ilay mitondra anao manodidina ny tanàna. Izy io dia manana ny endriny ambony sy ambany ary mamela anao hahafantatra toerana mariky ny tanàna: The Auditorium, the Parliament, the University La Laguna, the Plaza de España, the Plaza de la Candelaria ... Tsara izany fitsangatsanganana raha tsy mandeha ara-potoana ianao na te hijery kely alohan'ny hiverenana amin'izay tena mahaliana anao.
Ny zava-misy fa tanàna dia tsy midika hoe tsy afa-mandositra any amoron-dranomasina ianao. Eto ny tsara indrindra dia Las Teresitas Beach, morontsiraka fasika volamena lava kilometatra iray kilaometatra misy hazo rofia sy rano milamina ary rivotra mahafinaritra. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo morontsiraka tsara tarehy indrindra ao amin'ny avaratry Tenerife. Eo anelanelan'ny Tendrombohitra Anaga, eo ivelan'ny renivohitra, ao amin'ny tanànan'i San Andrés. Raha tsy tianao ny olona dia aza mandeha amin'ny faran'ny herinandro fa raha mandeha andro vitsivitsy ianao dia aza adino izany, indrindra raha tsy fantatrao ny iray Morontsiraka fomba Karaiba.
Mazava ho azy fa ny hetsika malaza indrindra eto dia ny karnavaly. Eo anelanelan'ny volana febroary sy martsa dia velona mandritra ny herinandro ny tanàna, mameno olona misaron-tava, misy ny matso sy ny dihy mandritra ny alina ary tsy isalasalana fa lasa mahafinaritra be ho an'ireo izay olona antoko.
Aorian'i Santa Cruz dia mitsako. Toerana tsara tarehy io avaratra andrefan'ny fototry ny Teno Mountains. Izany dia tanàna mahafinaritra Mety ho sarotra ny hanatratra izany saingy mendrika ny ezaka sy ny dia. Lohasaha lalina, zavamaniry maitso mavana, toerana mitazona ny fofonao. Andao lazaina fa a toerana majika. Mandehandeha adiny telo eo ho eo avy eo amin'ny tanàna dia tonga any Masca Bay ary any ianao dia manana sehatra mahatalanjona iray hafa.
Avy amin'ny bay dia manana safidy roa hiverina ianao, na handeha hiverina, izay mafy, na mandeha sambo Ireo Giants. Misy hantsana avo misy loko samy hafa, ireo goavambe, rano mafana, hantsana manjavozavo ary tanàna iray tsy dia misy marina, trano fisakafoanana ary bara amoron-dranomasina turkise. Tsara tarehy? Mazava ho azy.
Ny marina izany Tenerife dia manana zotra maro, na miditra ianao fiara na manofa iray toa tianao bisikileta. Ny tranokala mihitsy dia manolotra fitsangantsanganana izay ahitana ny fitsangatsanganana ala kesika, ny Camino de Santiago, fanakambanana eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra, ny tanimboaloboka, ny famokarana tantely, ny iray izay mamaky ny trano mimanda, ny iray hafa izay mamaky hazo amandy amin'ny voninkazo, amin'ny fotoana iray amin'ny taona. lalan'ny tranombakoka sy làlana manan-tantara ...
Fitsangatsanganana Tenerife dia ho hitanao fomba fijery maro: Archipenque, Ayosa, Baracán, Chivisaya, Cruz de Hilda, El Boquerón, Cumbres del Norte viewpoint, Cruz del Carmen viewpoint.
Inona avy ireo torapasika izay atolotray ao Tenerife? Misy moron-dranomasin'i fasika volamena ary koa ny fasika mainty. Ao ny Playa Jardín Complex, miaraka amin'i Playa Chica sy Punta Brava, toerana malaza any Puerto de la Cruz ary voahodidin'ny zaridaina. Ny morontsiraka mangina dia Alabama Beach izay eo akaikin'ny hotely: rano tony, fasika volamena, eo akaikin'ny hantsam-bato, miendrika akorandriaka ary ny toerana tsara indrindra tsy hahitanao ny masony rehefa filentehan'ny masoandro.
Ny morontsiraka hafa dia ny Ajabo Beach, an'ny fasika mainty, ny Alcalá Beach, ny an'i Almáciga, ny Morontsiraka Antequera, miafina ary sarotra idirana an-tongotra, ny Arenisc Beachna, El Bobo Beach, any atsimon'ny nosy, ny feno sy manampy El Camisón Beach, ny Playa de El Médano atsimo mahafinaritra, ny El Socorro Beach, tsara ho an'ny surf, La Arena Beach, mainty sy vatokely, La Jaquita, La Pinta na La Nea, manana 25 metatra sy 210 metatra ny halavany.
Betsaka kokoa ny morontsiraka, miankina amin'ny lafin'ny nosy hifindranao daholo izany na raha mikasa ny hamangy azy ianao. Mitohy amin'ny toetran'ny Tenerife ianao dia tsy afaka mandao ny Teide National Park, Lovan'izao tontolo izao. Ohatra iray amin'ny volkanisme, tontolo marefo izay, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ny tampon'isa avo indrindra any Espana misy metatra 3718s. An-jatony ny kônina, lava-bato, renirano, kaldera ary ny Tedie-Pico Viejo stratovolcano, miavaka eto amin'izao tontolo izao.
Manana ny valan-javaboary 19 arivo hektara, goavambe. Afaka mankany ianao amin'ny bus avy any Puerto de la Cruz na avy any Costa Adeje na amin'ny fiara. Raha mandeha fiara ianao dia tsara kokoa satria afaka mandeha amin'ny valan-javaboary iray manontolo ianao ary ny làlana tsara indrindra dia ny miakatra amin'ny lalana iray ary midina amin'ny lalana hafa. Ny riandranon'i Teide dia mamorona kaldera 17 metatra ary eo no ahitanao ilay Tendrombohitra Teide miaraka amin'ny famirapiratany 3718 metatra, maha-izy azy ny volkano fahatelo avo indrindra eto an-tany.
Azonao atao koa mampiasa ny tariby tariby, miaraka amin'ny gara miorina amin'ny haavon'ny 2.356 metatra sy ny metatra 3.555 metatra. Eo anelanelan'ny iray sy ny iray hafa dia misy valo minitra ary sidina mahavariana izy io. Avy amin'ny terminal dia azonao atao ny manohy ny làlan-kaleha izay mamela anao any an-kavoana. Handeha an-tongotra 40 minitra ary tsy mora izany fa mendrika ny fahitana ny nosy sy ny ranomasina. Mazava ho azy, tsy afaka mandefa traikefa tahaka izany ianao ary tsy maintsy mangataka fahazoan-dàlana manokana amin'ny valan-javaboary, an-tserasera ary mialoha. Tsy mandoa vola ianao fa tsy maintsy mamaritra daty.
Ao amin'ny valan-javaboary misy koa ny tambajotram-by làlana mitarika tena, na miaraka amin'ny fitarihan'ny matihanina isan'andro afa-tsy ireo daty ireo: 25 Desambra sy 1 ary 6 Janoary. Samy hafa ny lalana sy ny fahasarotana amin'ny lalana ka tokony ho fantatrao ny fahaizanao.
Ny zavatra iray azonao atao dia ny mitsidika ny IAC (Instituto Astrofísico de Canarias). Ny orinasan'ny Volcano Life dia manolotra fitsangatsanganana voatarika amin'ny fiteny maro. Ao amin'ny Internet ny famandrihana. Ao anatin'ny valan-javaboary ihany koa ny Zaridaina botanika.
Raha te-hanampy tantara ianao dia afaka fantaro ireo ivon-tantara manan-tantara amin'ireo vohitra sy tanàna samihafa avy ao amin'ny nosy: ny afovoan-tany Garachico, Buenavista del Norte, Arona, Guía de Isora, ivon-toerana manan-tantara an'i Güimar na Icod de los Vinos, ary tsy dia mahomby aho satria misy tanàna sy tanàna maro izay mahafinaritra ny fony manan-tantara. ihany koa misy tranombakoka ka araka ny hitanao dia manana ny zava-drehetra i Tenerife.
Araka ny hitanao, tsy misy olona mety mankaleo ao Tenerife.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Tenerife » Inona no hatao any Tenerife
Inona no jerena ao Oviedo